- प्रकाश तिमल्सिना
घटना २२ मंसिर २०६४ को हो ।
बिहान गोल्फुटार घरमा बसिरहेका थिए उनी । साथमा श्रीमती पनि थिइन् ।
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज जान ठिक्क परेका थिए । अघिल्लो दिन जेठा छोरा सुधीरको छोरा जन्मिएको थियो । उनमा नातिको अनुहार हेर्ने हुटहुटी थियो ।
त्यही बेला एक जना महाप्रबन्धक निवासमा आए । ती महाप्रबन्धकको नाम भने उनले उल्लेख गर्न चाहेन्् ।
बिहानको करिब ९ बजेको थियो ।
ती महाप्रबन्धकले भने, ‘तपाईंमाथि आपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्छ, होस् गर्नुहोला ।’
उनी अर्थात् लक्ष्मणलाल कर्ण यो कुरा सुनेर छक्क परे । ‘त्यतिखेर हाम्रो नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को आधिकारिकताका बारेमा विवाद चलिरहेको थियो । भोलिपल्ट २३ गते निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताका बारेमा छिनोफानो हुने थियो ।’
कर्णले भने, ‘के त्यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्छ र ? मैले त कुरै बुझिनँ ।’
ती व्यक्तिले अरूअरू कुरा गरेर कर्णलाई अलमल्याए । त्यही बेला एकछिनमा अनिल झा कर्णको घरमा आए । ‘खासमा उनी मलाई लिन आएका थिए । उन सुन्धारा जानुपर्ने भयो, तपाईं पनि हामीसँग हिँडनुहोस् भने । खासमा अनिलजीले राजेन्द्र महतोजीसँग भेट गर्ने भनेर मलाई सुन्धारा जानुपर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो’, कर्ण भन्छन् ।
कर्णले ‘नाति जन्मिएको छ, हेर्नसमेत पाएको छैन, पहिला त्यहाँ पुगेर आउँछु अनि तपाईंसँग जहाँ जानुपर्छ, जाउँला’ भने ।
अनिलले ‘पहिला सुन्धारा जाऔँ, त्यसपछि तपाईं अस्पताल जानुहोला’ भने पछि कर्ण उनको गाडीमा चढेर सुन्धारा आए ।
सुन्धारा पुगेपछि होटल भ्याली अगाडि लगेर गाडी रोके अनिलले । ‘म गाडीमा नै थिएँ, अनिल होटलभित्र छिरे । त्यो होटलमा नेपालगञ्जका आनन्द महापाल, देवेन्द्र मिश्रा र रामेश्वर राय (हालका श्रममन्त्री)जीहरू हुनुहुँदो रहेछ’, कर्णभन्छन्, ‘अनिलजीले मलाई पनि माथि बोलाउनुभयो । मलाई महापालजीको कोठामा लगियो । त्यहाँ अनिलजी र महापालबीच पार्टीको विषयमा भनाभन भयो, म छक्क परेँ ।’
वादविवाद परिरहेका बेला श्यामसुन्दर गुप्तालाई फोन गरे कर्णले । त्यतिबेला गुप्ता आपूर्तिमन्त्री थिए । बहालवाला मन्त्रीका मान्छे केही समयभित्रै होटल भ्यालीमा आइपुगे । त्यहाँ उनी ४-५ जना बलिया पाखुरा भएका केटाहरू बोकेर आएका थिए । मन्त्री गुप्ताको निर्देशनपछि अनिललाई समातेर महापालजीको कोठाबाट तल झारे, कर्णलाई केही गरेनन् ।
‘अनिललाई लैजान श्यामसुन्दरको छोरा आएको थियो, अरू २-४ गुन्डाहरूसमेत बोकेर । मैले सोचेँ, यहाँ गडबड हुँदै छ’, कर्ण भन्छन्, ‘अनिललाई कोठाबाट निकालेपछि महापालजीले ‘एकछिन है’ भनेर बाहिर जान तयार भएको भन्दै कहिले कमिज लगाउँथे, फुकाल्थे, कहिले सर्ट लगाउँथे, फुकाल्थे । खासमा उनी मलाई अलमल्याइरहेका थिए ।’
नभन्दै श्यामसुन्दर पनि होटलमा आइपुगे । उनका मान्छेले सुरुमा कर्णको मोबाइल खोसे । गुप्ताले भने, ‘गुरुदेव ! आपको कुछ नही होगा, चलिए हमारे साथ ।’
कर्णले भने, ‘मेरो नाति हिजो जन्मिएको छ, म अस्पताल उसलाई हेर्न जान लाग्या’ छु ।’
‘हुन्छ, तपाईंलाई म अस्पताल पुर्‍याइदिन्छु तर अहिले मसँग हिड्नुहोस्’, गुप्ताले भने । कर्णले मानेनन् ।
त्यसपछि नमाने हल्का बल प्रयोग गर्ने सङ्केत गरेपछि कर्ण होटलबाट झरे । ‘तर, श्यामसुन्दरले आफ्नै गाडीमा बस्न भने, मैले मानिनँ । हुल हुज्जत गर्दै अनिललाई लगेको देखेपछि मैले जबर्जस्ती गर्ने कुरा भएन’, कर्ण सम्झिन्छन् ।
नाती हेर्न जान तयारी अवस्थामा रहेको मान्छे, सुन्धारा पुगे । न नाति हेर्न पाए, न त अनिलले भनेझैँ राजेन्द्र महतोलाई भेट्न पाए । ‘तर, गुप्ताले गरेको हर्कतका बारेमा महतोजीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् भनेर नजिकै रहेका पुण्यकला श्रीवास्तवलाई भन्न खोजेँ तर गुप्ताले दिएनन्’, कर्ण भन्छन् ।
त्यसपछि कर्णलाई सिधै पुल्चोक मन्त्री क्वार्टर लगियो । कर्ण पुग्नुअघि नै अनिललाई एउटा कोठामा राखिएको थियो भने भर्‍याङभरि गुप्ताका मान्छे थिए ।
‘मलाई अर्को कोठामा लगेर राखियो । म पुग्दा अनिललाई धेरै गाली गरिरहेका थिए’, कर्ण भन्छन्, ‘गुप्ताजीले अनिललाई धेरै गाली गरेपछि मैले सहन सकिनँ र सोधेँ, ‘गुप्ताजी ये क्या हो रहा है ?’
गुप्ताले भनेको सम्झिन्छन् कर्ण, ‘गुरुजी ! आप शान्त रहिए, आपका कुछ नही होता है ।’
अनिललाई गालीगलौज गर्दै अनिलतिर आँखा रातो बनाउँदै गुप्ता भन्थे, ‘यो धेरै करायो भने खोलामा फालिदिनुपर्छ ।’
कर्णलाई भने कुनै दुव्र्यवहार गरेनन् तर कर्णले भने, ‘ए श्यामसुन्दर ! तिमी बदमासी गरिरहेका छौ । मन्त्री भएर यस्तो काम गर्ने ?’
तर, गुप्ताले सुनेनन् । उल्टै भने, ‘गुरुजी ! तपाईंलाई केही हुँदैन, अब यहाँबाट अस्पताल जाने हो, एकछिन पख्नुहोस् ।’
कर्णका अनुसार गुप्ता कर्णको घरमा आउँदा सधैँ कर्णका घुँडामा मालिस गरेर चाकरी गर्थे । ‘आज उनैले मेरो मोबाइल मात्र खोसेनन्, मलाई जबर्जस्ती पुल्चोक पनि लगे । त्यो देखेर म छक्क परेँ’, कर्ण भन्छन् ।
बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न २ बजेसम्म उनीहरूलाई अलगअलग कोठामा राखियो । कर्ण र अनिललाई कोठामा राखेर गएका गुप्ता २ बजेतिर मन्त्री क्वार्टर आए ।
‘ल गुरुजी ! अस्पताल जाऔँ’ भनेर गुप्ताले भनेपछि कर्ण तयार भए । तर, अनिललाई फेरि गालीगलौज गर्दै अर्को गाडीमा हालियो । कर्ण मन्त्रीको गाडीमै चढे ।
पुल्चोकवाट निस्किएपछि कुपन्डोलतिर मोडिनुपर्ने गाडी जावलाखेलतिर लाग्यो ।
कर्णले भने, ‘अस्पताल जाने त कुपन्डोल हुँदै हो, कहाँ जावलाखेलतिर लगेको ?’
गुप्ताले भने, ‘गुरुजी ! यो बाटोमा धेरै जाम छ, म दिक्क भइसकेँ, सातदोबाटो हुँदै रिङरोडबाट जान लागेको हो ।’
कर्णले पनि सोचे कि जाममा फस्नुभन्दा रिङरोडबाट गएकै राम्रो ।
तर, सातदोबाटो नजिक पुगेपछि गल्लीभित्र गाडी हुलेपछि भने कर्ण झसङ्ग भए । सातदोबाटोमा जाम छ भन्दै गल्लीगल्लीमा ५-६ पटक घुमाउँदै एउटा एकतल्ले घरमा लगियो, त्यो घर कहाँ थियो, कर्णले अझैसम्म ठम्याउन सकेका छैनन् ।
एकतल्ले घरभित्र मन्त्रीको गाडी छिर्‍यो । त्यहाँ रोकियो र कर्णलाई झारियो । नम्र भाषामा भित्र जान आग्रह गरियो । ‘त्यहाँ पुग्दा त अनिलजी रहनुभएको रहेछ । एउटा कोठामा अनिलजी टाउकोमा हात राखेर बेञ्चमा निरीह भएर बसिरहनुभएको थियो, त्यही ठाउँमा मलाई पनि राखियो’, कर्ण भन्छन् ।
सानो कोठामा २ जना अर्थात् कर्ण र अनिललाई बेञ्चमा राखियो । गुप्ताका १०-१२ जना मान्छेहरू भुइँमा थिए । त्यहाँ पनि गुप्ताले अनिललाई आमाचकारी गाली गरेका कर्ण बताउँछन् । ‘कारण, अनिलजी सुरुदेखि नै प्रतिवाद गरिरहनुभएको थियो । त्यहाँ पनि अनिलजी र गुप्ताको भनाभन भयो ।’
त्यसपछि गुप्ताले पेस्तोल निकालेर उनका मान्छेलाई दिँदै भने, ‘अनिलले यताउता गर्‍यो भने गोली ठोकिदिनू र खोलामा फालिदिनू ।’
उक्त आदेशअनुसार गुप्ताको मान्छेले गुप्ताले दिएको बन्दुक समात्यो ।
‘गुरुजी ! आपको कुछ नहीं होगा, आप यहीं पर आरम कर लिजिए, हम आ रहा हुँ’ भन्दै गुप्ता हिँडेका कर्ण बताउँछन् ।
त्यतिखेरसम्म उनीहरू बस्ने कोठाको झ्याल, ढोका बन्द गरिएको थियो । झ्याल खोल्नसमेत अनुमति थिएन ।
२ जनाको रेखदेख गर्नका लागि गुप्ताले छाडेका १० जनामध्ये ३ जनाजतिलाई कर्णले चिन्थे । ती उनकै पार्टीका भैरहवातिरका कार्यकर्ता थिए ।
त्यसमध्ये एउटा गुरुङ केटाले कर्णलाई सोध्यो, ‘बुबा, तपाईंले मलाई चिन्नुभयो ?’
अब उनलाई पर्‍यो फसाद !
‘चिनेको छैन भनुँ भने मज्जासँग चिनेको छु, चिनेको छु भनेँ भने यी त अपहरणकारी हुन्, मलाई चिन्दो रहेछ भनेर ड्याम्मै पेस्तोलले हानिदियो भने के गर्ने ? यतिसम्म गर्नेको त भर हुँदैन ।’, कर्णले सकस सुनाए ।
त्यसपछि कर्णले भने, ‘बाबू, मैले तपाईंलाई चिनिनँ ।’
केटाले भन्यो, ‘ल अस्ति न गोरखपुर स्टेसनमा कैलाश गुरुङले तपाईंलाई रिसिभ गर्न जाँदा म पनि थिएँ नि ! बिर्सनुभयो ?’
‘होला बाबू, म अलिक बुढो मान्छे, सबै याद हुन सकेन । त्यो दिन कैलाश याद छ, तपाईंहरूचाहिँ अहिले याद भएन’ भनेर झूटो कुरा बोले कर्णले- ज्यानको जोखिम जो थियो ।
उनलाई त्यतिखेर टाउको फुट्लाझैँ भएको सम्झिन्छन् । ‘सायद सानो कोठा भएर अक्सिजन नपुगेकाले होला । म सुर्ती खाने मान्छे, १ सय रूपैयाँ दिएर सुर्ती ल्याइदेऊ न भनेँ’, कर्ण भन्छन् ।
त्यही गुरुङ केटाले एक जनालाई सुर्ती लिन पठायो तर एक घन्टापछि आएर भन्यो, ‘सुर्ती पाइएन ।’
कर्णलाई झन् टाउको फनफनी घुम्यो । त्यतिबेलासम्म अनिल र कर्णको बीचमा कुनै संवाद भएको थिएन ।
त्यहीबीचमा खाना आयो । अनिलले खान मानेनन् । ‘अब जे गरे पनि खाना खानै पर्छ, खाऊ भनेर सम्झाएपछि अलिकति मात्र खाए, मैलेचाहिँ मज्जासँगै खाएँ’, कर्ण भन्छन् ।
‘एकछिनमा आउँछु’ भनेर आफूहरूलाई बन्द कोठामा राखेर निस्किएका गुप्ता १ घन्टा भयो, आएनन्, २ घन्टा भयो, आएनन् । ‘अब त छाड्लान भनेर १२ बजेसम्म कुरियो, उनी आएनन् बरु रातको १२ बजे २ प्याकेट खाना ल्याएर दिए’, कर्ण भन्छन्, ‘फेरि अनिलले खाना खान मानेनन्, मैले आग्रह गरेपछि उनले खाना दिउँसोको भन्दा बढी खाए तर पूरै खाएनन् ।’
२ जना बेञ्चमा सुते । रातभर न अनिल निदाए, न त कर्ण नै निदाए । १० जना केटाहरू भने भुइँमा सुतेका थिए, एक-दुई जना जाग्रम बसेका थिए ।
बिहान भयो, गुप्ता आएनन् ।
उनीहरूलाई कुर्नेमध्ये एउटाले भन्यो, ‘ल एउटा अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो, दुई-तीनजना यहाँ बस्ने, अरू जाऔँ ।’
उनीहरूलाई कुर्नेमध्ये ४-५ जना बाहिर गए ।
त्यसपछि कर्ण र अनिललाई एकतल्ले घरको किचेन र अर्को रुमसम्म आउजाउ गर्ने सुविधा दिए । तर, झ्याल-ढोका खोल्न र बाहिर हेर्न भने दिएनन् । ‘उनीहरू अलिअलि हामीसँग कुराकानी गर्थे, नराम्रो केही गरेनन्’, कर्ण भन्छन् ।
अघि निस्किएका केटाहरू एकछिनमा आए र भने, ‘ल अप्रेसन सफल भयो ।’
‘अप्रेसन’ भनेर कोड भाषा प्रयोग गरेको देख्दा कताकता डर लाग्थ्यो कर्णलाई । १२-१ बजेतिर खाना ल्याएर दिए, अनिलले कम खाए, कर्णले पूरै खाए ।
२३ गते दिनभर उनीहरूलाई त्यही घरभित्र थुनेर राखियो ।
अचानक राती ८ बजेतिर मन्त्री गुप्ता आए । अघिल्लो दिन २ बजे हिँडेका गुप्ता भोलिपल्ट बेलुका मात्र आए । आउनेवित्तिकै अनिलतिर हेर्दै गुप्ताले भने, ‘यसलाई गोली हानेर खोलामा फालिदिनू ।’
र, पहिला अनिललाई बाहिर निकालियो । त्यसपछि, ‘माफ किजिए गुरुजी, कभी कभी ऐसा होता है’ भन्दै अस्पताल पुर्‍याइदिन आएको भनेर कर्णलाई आफ्नो गाडीमा जान आग्रह गरे गुप्ताले ।
अनिललाई अर्कै गाडीमा र कर्णलाई गुप्ताकै गाडीमा राखेर सातदोबाटोबाट कोटेश्वरतिर गाडी गुडे ।
तीनकुने पुगेपछि मन्त्रीको पीएसओको वाकीटकीमा एउटा खबर आयो, जुन गाडीमा उनीहरू चढेका थिए, त्यस गाडीलाई प्रहरीले पछ्याइरहेको छ ।
‘त्यसपछि भने गुप्ता निकै आत्तिए । सिनामङ्गल चोकमा पुगेपछि अचानक गाडी रोक्दै पर्सबाट ५ सय निकालेर गुरुजी ! ट्याक्सी पक्रेर अस्पताल जानुहोस्’, कर्ण भन्छन्, ‘मैले उनको पैसा लिन मानिनँ । झन्डै ३० सेकेन्डमा मलाई झारेर उनी आफ्नो बाटो लागे ।’
राती कर्ण सडकमा एक्लै भए । अब कता जाने भन्ने भयो ? सोचे, ‘राजेन्द्रजी (महतो)को घर नजिकै छ, त्यहीँ जान्छु ।’
त्यसपछि पैदलै उनको घरसम्म गए कर्ण । त्यहाँ पुग्दा राजेन्द्रकहाँ अनिल पनि पुगेका रहेछन् ।
‘अनिलजीलाई जिउँदो देख्दा बल्ल प्रफुल्ल भएँ । मेरो टाउको दुख्न छाडेर चंगा जस्तो भयो’, कर्ण भन्छन् ।
राजेन्द्रले उनीहरू अपहरणमा परेपछि गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई फोन गरेर खबर गरेका रहेछन् तर उनीहरूले तत्काल काम नगरेको र त्यति रेस्पोन्स नगरेको भन्ने सुनाए । त्यही रात पत्रकार सम्मेलन गरेर भएका घटनाहरूको विस्तृत जानकारी दिए उनीहरूले ।
राती ११-१२ बजेतिर नातिलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगे कर्ण । उनका जेठा छोरा र छोरीहरू अस्पतालमा कुरिरहेका थिए । सबैले सोधे, ‘तपाईं कहाँ जानुभएको थियो ? खबर पनि गर्नुभएन !’
कर्णले भने, ‘ल त्यो कुरा छाड, म कतै पार्टीको बैठकमा थिएँ । मोबाइल स्विच अफ भएकाले खबर गर्न नपाएको हो । सुधीरलाई सबै थाहा छ ।’
सुधीरले उनीहरू अपहरणमा परेको खबर पाएपछि भोलिपल्ट बिहानै गएर घरको टीभी बन्द गरिदिएछन् ताकि आमाले बुबा अपहरणमा परेको खबर थाहा नपाउनुहोस् ।
‘त्यसपछि म राती १२ बजेतिर घर गएँ र सुतेँ । श्रीमतीले म अपहरणमा परेको त्यो बेलासम्म थाहा पाएकी थिइनन्’, कर्ण भन्छन् ।
उनीहरूलाई छाड्नुअघि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को स्वामित्व गुप्ताको समूहले पाइसकेका रहेछन् । उनले ५० जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २६ जनालाई लिएर निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दर्ता प्रमाणित गरिसकेछन् जबकि कर्ण अपहरणमा पर्नुअघिसम्म ३८ जना सदस्य महतोतिर थिए भने बाँकी उनीहरूसँग ।
‘मलाई अपहरण गरेर राखेपछि उनीहरूले धमाधम हाम्रा साथीहरूलाई फकाएर, लोभ्याएर, धम्क्याएर पार्टी आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचन आयोगमा लगेर हस्ताक्षर गराइसकेका रहेछन्’, आफूहरूलाई अपहरण गर्नुको अन्तर्यबारे कर्ण भन्छन्, ‘पार्टी त हाम्रो पक्षमा अब औपचारिक रूपमा रहेन, यतिका लागि हामीलाई अपहरण गरिएको थियो ।’
भोलिपल्ट अनिल र कर्ण हनुमानढोकामा अपहरणमा परेको भन्दै किटानी जाहेरी दिन गएं तर हनुमानढोकाका प्रहरीले उजुरी लिन माननेन् ।
‘त्यसपछि हामी मानवअधिकारवादी सुबोध प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षितलाई भेट्न गयौँ अनि उनीहरूसँगै पुनः हनुमानढोका पुग्यौंँ’, कर्णले भने, ‘त्यसबेलाका एसपीले मन्त्रीज्यूको नाम काटेर उजुरी दिनुहोस्, हामी दर्ता गर्छौं भने ।’
‘हामीलाई अपहरण गर्ने नै मन्त्री हुन् त अरू कसको नाम हाल्नु ?’ भने उनीहरूले तर पनि एसपीले जाहेरी लिन मान्दै मानेनन् । जाहेरी लिन नमानेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिए ।
सीडीओ कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न आदेश दिएपछि हनुमानढोकाले बल्ल्ल उजुरी दर्ता गर्‍यो । हनुमानढोकाले उजुरी दर्ता गरेपछि एक जना प्रहरी निरीक्षकलाई बयान लिन कर्णको घरमा पठाइयो, बयान पनि लिइयो ।
‘मैले सोचेँ, अबचाहिँ अपहरणकारी मन्त्रीलाई साँच्चै कारबाही हुन्छ’, कर्ण भन्छन्, ‘तर, त्यसको ५-६ महिनापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त मुद्दा अघि नबढ्ने निर्णय गरेको खबर एक जना सरकारी वकिलले सुनाए । त्यतिबेला महान्याधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे थिए, उनी मेरा मित्र पनि थिए ।’
उनलाई फोन गरेर कर्णले सोधे, ‘हाम्रो मुद्दा किन अगाडि बढाउन नमिल्ने हो ?’
त्यतिखेर बञ्जाडे पोखरामा रहेछन् ।
‘कर्णजी, तपाईंहरू अपहरणमा परेको र मन्त्रीले अपहरण गरेको मलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो ध्रुवसत्य हो, त्यो मुद्दा अगाडि बढाउनु त हुन्थ्यो तर हेर्नु न मलाई त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभएको अब आफैँ बुझ्नुुहोस् न भनेर जवाफ फर्काए बञ्जाडेले’, कर्णको भनाइ छ ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । गुप्ताको पार्टी कोइरालाको सरकारमा थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले, त्यो मुद्दा अघि नबढाउनू भनेपछि मैले केही गर्न सकिनँ, माफ पाऊँ है भनेर महान्यायाधिवक्ताले भनेपछि हामीले पनि निष्कर्ष निकाल्यौँ, ल, भैगो त, केही नहुने रहेछ’, कर्ण भन्छन् ।
प्रकाश तिमल्सिना a